Okpokoro Okpokoro Egwu si Etiopia - ọcha na translucent - vidiyo
Tags Opal, Welo
Anyị maara N'ezie Opals Australia. Ma ruo afọ ole na ole, ọ bụ opal apeare ọhụrụ. Okpokoro Ogwu. Nkume a dị ọcha na translucent. Ọzọkwa na egwuregwu pụrụ iche nke agba. Ebe nkwụnye ya dị na ugwu Semien Wollo. Ke edem edere Ethiopia. Achọghị nchọpụta ọhụụ nke nkume a.
Ọdịdị ya dị ka mbido 1993
Ụfọdụ edemede kwuru ya na 1993. Ọ bụ na ahịa Nairobi. A ga-enye onye na-ahụ maka nkà mmụta mbara igwe Telahun Yohannes ihe ọ chọpụtara. Dr. N. Barot kwuru na ọ dị adị n'otu isiokwu bipụtara na 1994.
E nwetara 10 kilos nke nkume a na 1997. Ma, ọ bụghị ruo mgbe 2008 ga-ahụ nbibi ya na-amalite. Ụlọ ọrụ Eyaopal na Addis Ababa belata 400 grams. N'afọ ahụ kwa, e gosipụtara ya na ihe ngosi ihe omume ụwa. Ọ bụ na Sainte-Marie, France. Mgbe otu afọ gafere, ụlọ akwụkwọ Eyaopal bipụtara nkume 350 na Tuscon Show, USA. A mụrụ kpakpando ọhụrụ.
Ọ na-esighi ike ịkụpụta ihe
Nmepụta ya anọwo na-amụba kemgbe 2008. Minista Mines nke Etiopia na-akọ naanị ole na ole nke njiri na 2008. Nakwa ọtụtụ narị na 2009. Na n'ikpeazụ otu tonni na 2011. Naanị 5% nke nkume ndị ahụ dị mma iji ree ya ma 1% nwere àgwà ịtọba na ọla.
Anyị nwere ike ịhụ Welo na-amanye na veins silica. Naanị 2 ka 3 m si n'elu. O siri ike ịrụ ọrụ. N'ihi na ndị na-egwuputa ihe anaghị eji ngwá ọrụ nke oge a. Naanị ndị bi n'ógbè a nwere ike iji ihe ndekọ ndị a mee ihe. Ndị bi na ime obodo. Ya mere, ha na-eji usoro archaic eme ihe. Ọ dị ize ndụ iji wepụ nkume. Kemgbe Jenụwarị 2011, enwere ebe nrụọrụ ọrụ ọhụrụ. Ụkpụrụ ndị na-egwuputa ala yiri ka ọ ka mma. Ọ na-ekpuchi ndị ọrụ nchịkọta 500 ọkachamara. Gọọmentị Etiopia na-achịkwa ma na-ekpuchi akụnụba a. N'ihi ya, ndị na-azụ ahịa adịghị ekwe ka ha gaa n'ugbo ahụ. Ha enweghị ike imeso ụmụaka. Ya mere, a na-ahụ nnukwu nkume dị n'èzí nke ebe a na-egwupụta akụ.
Ohere Na-agba Ọkụ
zụta opal oputara na ụlọ ahịa anyị
Tags Ugboro abụọ, Opal
Tags Opal, polima, sịntetik
Tags Opal, sịntetik
Tags Cat anya, Opal